OnePlus2मा पछिल्लो: मौलिक स्नैपड्रैगन 810 र $ 320 भन्दा माथि मूल्य Androidsis
केही दिन अघि हामीले तपाईंलाई बतायौं कि नयाँ वनप्लस टर्मिनल, वनप्लस। म उहाँ मा शर्त सक्छ स्न्यापड्रैगन 810 XNUMX प्रोसेसर दोस्रो अनुकूलित संस्करणमा कि हीटिंग त्रुटिहरूबाट टाढा हुने छ कि कम्पनीहरूले उनीहरूको टाउकोमा यो छनौट गरेका छन्। वास्तविकतामा, ब्रान्डको फोनको दोस्रो पुस्ताको बारेमा अफवाहहरू र चुहावट जारी छ, र अब तिनीहरू नयाँ लाइनतिर औंल्याउँछन् जुन यसले चिपलाई पुष्टि गर्यो, यो नयाँ संस्करण हो भनेर अस्वीकार गर्दछ। तपाईले बुझ्नुभएन कि कसरी वनप्लस २ प्रोसेसर सुसज्जित गर्ने छ जुन समस्याहरू दिन जानिन्छ? चिन्ता नलिनुहोस्, हामी यो तुरुन्तै तपाईंलाई बुझाउनेछौं किनभने यसको एउटा चाल छ।
स्पष्ट रूपमा, अब वनप्लस २ चिपको बारेमा के भनिएको छ कि कम्पनीले प्रोसेसरको पक्ष र विपक्षको मूल्याses्कन गरेको छ र यसलाई विचार गर्दछ, विश्लेषण पछि, यसको नयाँ टर्मिनल भित्रमा उत्तम उम्मेदवार हो: OnePlus 2। यद्यपि यसले सोनीलाई भइरहेको अत्यधिक तातोमा टर्मिनलको अधीनमा रहेको र जसको बारेमा धेरैले सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरिसकेको छ भनेर बिल हटाउँदैन। त्यसोभए, त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई हटाउने पहल कसरी गर्ने? परिमार्जन सहित धेरै सजिलो।
1 एक स्न्यापड्रैगन 810१० वनप्लस द्वारा परिमार्जित
2 वनप्लस २ का लागि 320 $२० भन्दा माथि मूल्य
एक स्न्यापड्रैगन 810१० वनप्लस द्वारा परिमार्जित
कुराको जादू लिनेमा हुनेछ मूल स्नैपड्रैगन 810१० र यसको आफ्नै प्यारामिटरहरू परिचय गर्नुहोस् जसले चिपलाई १.1,8 गीगाहर्ट्ज भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्न बाध्य पार्दछ। वास्तवमा, यदि तपाईं प्रोसेसरको मूल विशेषताहरू जान्नुहुन्छ भने तपाईंलाई थाहा हुनेछ कि यसको अधिकतम २GHz मा छ। यस तरिकाले, वनप्लसले यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छ कि यसका टर्मिनलहरूमा अत्याधिक तातो छैन कुनै निर्माता द्वारा प्रस्ताव गरिएको गुणवत्ता छोडे बिना जुन सँधै उत्तम हो। स्पष्ट छ, यदि तिनीहरूले सही निर्णय गरेका छन् भनेर जान्नको लागि, संशोधनको नतीजा के हुन्छ भनेर हेर्नु आवश्यक पर्दछ।
यस समयमा, OnePlus2को बारे मा कुराकानी गरिएको केहि चीजहरूको साथ, यो निष्कर्ष काढ्न गाह्रो देखिन्छ। अवश्य पनि, परिमार्जित प्रोसेसरको थेसिस, अलिकता फ्रिक्वेन्सी दिँदै, तर समस्याहरूबाट जोगिन निश्चित गर्नु पर्याप्त तार्किक देखिन्छ। आशा छ कि यो तर्क पनि प्राप्त तापमान मा लागू हुन्छ।
वनप्लस २ का लागि 320 $२० भन्दा माथि मूल्य
खराब समाचार यो हो कि प्रयोगको बारेमा चुहावटको साथ मूल स्नैपड्रैगन 810१० प्रोसेसर वनप्लस द्वारा नै परिमार्जित, बजारमा यस फोनले कति तिर्ने छ भन्ने पहिलो विश्लेषण पनि आउन थालेको छ। सबै चीजले स .्केत गर्दछ कि यो मूलको मूल्यको नजिक हुनेछैन। वास्तवमा विश्लेषकहरू यो विश्वास गर्दछन् कि यो बढाइएको $ 320२० अवरोध भन्दा बढी हुनेछ। युरोपेली डलरeयुरो असमानताको कारण अघिल्लो टर्मिनलमा e० यूरोको बृद्धिबाट उत्पन्न भएको सबै विवादलाई ध्यानमा राख्दै, मलाई यो लाग्दैन कि युरोपेली बजारमा यो समाचार एकदम राम्रो पाएको छ।
जे भए पनि, एक मार्केट जित्ने रणनीति गुणस्तर टर्मिनल, सुलभ र उचित मूल्य भन्दा अधिक मा नयाँ छैन। गुगलले आफैंले नेक्सस and र नेक्सस with सँग यस्तै प्रकारको कार्यहरू गर्‍यो, जुन उनीहरूले एकीकृत टेक्नोलोजीको लागि धेरै किफायती लागतमा बेचेका थिए। त्यसोभए नेक्सस arrived आइपुगे र जादु अन्धाधुन्ध खर्च बढायो। निस्सन्देह, यो बिक्रीमा ध्यान दिइयो र सायद खोज इञ्जिनले मूल थिसिसमा फर्कनु पर्छ। के वनप्लस २ लाई पनि त्यस्तै हुनेछ? हामी हेर्नेछौं ...।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » OnePlus2मा पछिल्लो: मौलिक स्नैपड्रैगन 810 र $ 320 भन्दा माथि मूल्य
ट्रोल फेस क्वेस्ट अशुभ साथ एक वास्तविक ट्रोल बन्नुहोस्
टावर स्ल्याश, तपाईको स्नायुहरूमा जानको लागि एक व्यस्त आर्केड खेल